Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၇၈ ) ( ရှက်မိပါတယ် ၊ တောင်းပန်ပါတယ် )	33
ငါတို့ တာဝန်မကျေ ခဲ့ဘူး ၊ အခုတော့ ညီငယ်တွေ အသက်သွေးချွေးတွေ ထပ်ရင်းနေရပြီ ။– တောင်းပန်ပါတယ် ၊ ညီငယ်တို့ရေ ။
– နောက်ဆုံး တော့ ၊ ဒါပါဘဲလေ ၊ ခေတ် အဆက်ဆက် မှာ ၊ တိုင်းပြည် အတွက် ၊ တရား မျှတမှု အတွက် ၊ ဘာအကျိုး အမြတ်ကိုမှ မမျှော်ကိုးဘဲ ကိုယ်ကျိုး စွန့်ရဲ ၊ အသေခံရဲတာ ၊
ညီငယ် ကျောင်းသားတွေကို ဒီစံနစ်ဆိုး ပါတ်ဝန်းကျင်ကြီးကိုသာ လက်လွှဲပေးနိုင်လို့ ။ – ပြောရရင် ၊ အာဏာရှင် စံနစ်ဆိုးတွေကို ကိုယ့်ခေတ်မှာ အပြီးပြတ် မ တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့လို့ ၊
အခု ညီငယ် ကျောင်းသားတွေ က ကိုယ်တွေရဲ့ ၊ မ ပြီးဆုံးခဲ့တဲ့ ၊ မကျေ ပွန်ခဲ့တဲ့ တာဝန်တွေကို ဆက်ထမ်းဆောင်နေရတာ မြင်တိုင်း ။
Foreign Resident says: -ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ / ၄ ရက် မြန်မာပြည် အင်တာနက်က စုတ်ပြတ်နေတာဘဲ ။
.ကျွန်တော် မလုပ်ရဲပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .ကိုဖေါလိုပဲ ပြောရတော့မှာပါပဲ“- တောင်းပန်ပါတယ် ၊ ညီငယ်တို့ရေ ။” .တချို့က လမ်းပေါ်ထွက်တာအဓိပ်ပါယ်မရှိဘူးပြောကြသေးတယ်…အဓိပ်ပါယ်သိပ်ရှိသပေါ့
Novy says: မောင်လေး/ ညီမလေးတို့ရေ..
Wow says: ခလေးတို့ရယ်…
ဦးခင်ခ says: အခု မန်းကနေစတင်တာထွက်ပြီး ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြချီတက်နေတယ်၊ အဲလိုဘဲ ဧရာဝတီ၊ပုခုက္ကူ၊ ထားဝယ်၊ချောက် တို့ကလည်း အသီးသီးသပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြချီတက်ကြမယ်။
အလင်းဆက် says: ကျနော်လည်း တောင်းပန်ချင်တယ်…
kai says: ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များဘက်မှ တောင်းဆိုထားသည့် အချက် ၁၁ ချက်မှာ
(၁) ပညာရေးမူဝါဒနှင့် ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဆက်စပ်ဥပဒေများ ရေးဆွဲရာတွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆရာဆရာမ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရန်ကိစ္စ၊ (၂) ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ၊ ဆရာသမဂ္ဂများ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းထူထောင်လှုပ်ရှားခွင့်နှင့် ၎င်းသမဂ္ဂများ တည်ရှိမှုအပေါ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စ၊ (၃) လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သော အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေတွင် ပါဝင်သည့် အမျိုးသားပညာရေး ကော်မရှင်နှင့် တက္ကသိုလ်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကိစ္စ၊ (၄) ဒေသအလိုက်နှင့် ကျောင်းအလိုက် လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိစ္စ၊ (၅) လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိသော စာမေးပွဲစနစ်နှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စနစ်များ ပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စ၊ (၆) ကျောင်းသားများ လွတ်လပ်စွာ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့လာ စူးစမ်းသင်ယူနိုင်သည့် သင်ကြားနည်းစနစ်များ ပြောင်းလဲရန်ကိစ္စ၊ (၇) တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ၏ ဘာသာစကား လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် မိခင်ဘာသာစကား အခြေပြုဘာသာစကားစုံ ပညာရေးစနစ် (mother tongue based multi-lingual education) ကို အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေတွင် ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းရန်ကိစ္စ၊ (၈) မသန်စွမ်းကလေးများ အပါအဝင် ကလေးအားလုံးအတွက် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး (inclusive education) ကိစ္စ၊ (၉) ကျောင်းသားအရေးအခင်းများကြောင့် ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည့် ကျောင်းသားများ ကျောင်းပြန်လည် တက်ရောက်ခွင့်ကိစ္စ၊
(၁ဝ) ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အသုံးစရိတ်၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်နိုင်ရေးကိစ္စ၊ (၁၁) အခမဲ့ မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ကို မူလတန်းအဆင့်သာမက အလယ်တန်းအဆင့်အထိ တိုးမြှင့်ကျင့်သုံးရေးကိစ္စ အစရှိသည်တို့ ဖြစ်သည်။
kai says: US က..၂၀၁၄က သုံးတဲ့ဘတ်ဂျက်..။
kai says: (၁ဝ) ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အသုံးစရိတ်၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်နိုင်ရေးကိစ္စ၊ အဲဒီတောင်းဆိုချက်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်..။
(၁၁) အခမဲ့ မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ကို မူလတန်းအဆင့်သာမက အလယ်တန်းအဆင့်အထိ တိုးမြှင့်ကျင့်သုံးရေးကိစ္စ အခုတလောတင်.. အိုဘားမားက.. အထက်တန်းပညာရေးကျော်ပြီး.. ကောလိပ်တွေအထိ..အခမဲ့ပညာရေးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းကြိုးစားနေတာမို့… ဒါကလည်း… စိတ်ဝင်စားစရာပါ..။
ဦးခင်ခ says: ခေတ်လူငယ်တွေကို အနာဂတ်မှာ တိုင်းပြည်အတွက် နေရာပေးချင်ရင် အဲဒီအသုံးစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း ကိုစဉ်းစားပေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
kai says: Eleven မှာ.. အစိုးရတောင်းထားတဲ့ဘက်ဂျက်.. ကျပ်ဘီလီယံ၂၀၀၀၀ တဲ့..။
ဦးခင်ခ says: တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်မြို့က အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ကျောင်း သားသပိတ်ကို ဒီကနေ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက်နေ့ကစပြီး ခေတ္တရပ်နားကြောင်း ဆန္ဒပြခေါင်း ဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းလွင်ဦးက ပြောပါတယ်။
Mr. MarGa says: http://www.myanmarparliament.gov.mm/wp-content/uploads/2014/10/41.-29-9-2014-National-Education-Law.pdf
ဦးခင်ခ says: ” နေသာသလို နေလည်း ရပါတယ် ”
ဦးဦးပါလေရာ says: ​ကျောင်းသား​တွေကိုကြည့်​ပြီး
မြစပဲရိုး says: စဉ်းစားပြီးပါပြီ။
kai says: ကျောင်းသားတွေပဲအရီးလတ်ရယ်..
ညှိနှိုင်းပွဲမှာ.. လမ်းလျှောက်အားကစားအနေနဲ့ဆက်ချီတာပါဆိုပြောပြီး.. ရန်ကုန်အထိဆက်တက်..။ သမိုင်းဝင်.. မိန့်ခွန်းတခုပြော..။
သမိုင်းရေးကြ..။ Civil Rights March on Washington
Wow says: Kyaw Zwa Min Htut
ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီကြဖို့ လိုပါတယ်။ ပြောချင်တဲ့ ဆိုလိုရင်းက ခုမှ ရောက်တယ်။ မောထှာ … ဖဘက သွားမလာတာ.. ဒါလေးဖတ်ကျိ အရီး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1350
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ကျော်စွာမင်းထွတ် says: မြောက်ကိုရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ အီရတ်၊ ဆိုဗီယက် ဥပမာတွေ အများကြီးပါ။)
apolo11 says: Dear Aunty Mya,
uncle gyi says: ကျွန်မ ဘက်က ကြိုက်ကြေးထပ်ပြီး လောင်း ရဲ တယ်။
Ma Ma says: (တကယ်ဖြစ်သင့်တာက အခုလာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါနိုင် ဖို့ အတွက် အားလုံး ဝိုင်းပြီး ပံ့ပိုး နေသင့်တာ။)
ဆန္ဒတွေ မစောကြပါနဲ့။ လူထုဆန္ဒကို နားထောင်ပြီး အမှန်တရားဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် ခေါင်းဆောင်ရအောင် အရင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှ အိနြေ္ဒရရ အေးအေးချမ်းချမ်း ဆွေးနွေးပြောဆိုကြရင် ပိုမကောင်းလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: Eleven Media Group
ဦးဦးပါလေရာ says: .နဲနဲ ထပ်ပြောဘို့ ကျန်နေလို့ဗျာ….
ဦးခင်ခ says: အခုအချိန်မှာ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း အဆင်ပြေစွာရပ်တည်နေတဲ့သူတွေ ပုံမှန်ဝင်ငွေရ အလုပ်ရှိသူတွေက အခုလို ကျောင်းသားတွေ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာကို မလိုလားကြတာများပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၈၈ တုန်းကလို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြန်လည်နိုးထ အာဏာသိမ်းမှာကို စိုးရိမ်ကြဟန်ပါဘဲ၊ ဒါလဲ ဖြစ်သင့်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေပါဘဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲလို အလုပ်ဝင်ငွေတွေရပ် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ကြမှာကိုး ဒါလဲ ကိုယ့်ထိမှာမို့နာကြဟန်ပါ။
Foreign Resident says: ” နောက်ဆုံးတော့ ကျောက်လုံးဘဲ အကယ်ဒမီရတာပါဘဲ ”
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဘဖော စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခု ရှိနေပြီပေါ့။ ပွဲတောင်းပါတယ်၊ မချွင်းမချန်လေး ပြောပြပါဦး။
Courage says: လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလာတဲ့အခေတ်မှာ ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို ရဲရဲကြီး အသုံးချတတ်တဲ့ အတွက် ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးပါ။
padonmar says: ကျမကတော့ တွေဝေနေတယ်။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ကျောင်းသားဘဝတုန်းက အများအကျိုးရှိသွားစေတာလေ ဆစ်ခု လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဝင်ကြွားတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အနီးအနား စပ်မိလို့ပြောမိကြတဲ့ထဲ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့မောင်ညီမငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတချို့ရဲ့ပတ်သတ်ကြောင်းတွေထဲမှာ
မြစပဲရိုး says: ဒီတစ်ပွဲတော့ တစ်ရွာလုံး နဲ့ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီလား တွေးတာ။
ဒီအချိန်မှာ အဓိက နဲ့ သာမည ကို ခွဲ မသိနိုင် တဲ့ လူကြီး များ ကိုတော့ ……. နောက်ဆုံးတော့ လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့တန်ရာ တန်ရာ ဘဲ ရတယ် ဆို တဲ့ စကား က အလကား ပြောခဲ့တာ မဟုတ် ဘူး ဆို တဲ့ အကြောင်း ၂၀၁၅ အလွန်မှာ သိရတော့ မှာပေါ့။